मध्यरातमा सुन्दरी मातालाई झाक्रीले यस्तोसम्म गरेपछी बिचरा डाको छोडेर रोइन ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 10, 2021 AdminLeaveaComment on मध्यरातमा सुन्दरी मातालाई झाक्रीले यस्तोसम्म गरेपछी बिचरा डाको छोडेर रोइन ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
केही समय अघिदेखि मोरङमा धेरै युवतीहरु बिरामी पर्दै मुर्छा पर्न थालेपछी धेरै झाक्रीले चिन्ता बसे तर कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन ।
छुटेपछि झाक्री फेरि आफ्नो निरन्तर काममा फर्कीएका छन । धेरै बिरामीहरुको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ । झाक्रीले छुट्नेबित्तिकै फेरि अर्को चमत्कार गरेका छन । झाक्रीले सानै उमेरकि सुन्दरी माता उतारेर सबैलाई चकित बनाएका छन । सुन्दरी मातामा पनि झाक्रीको जस्तै अलौकिक शक्ति रहेको झाक्रीले बताए । माता उतार्ने क्रममा आफू पाथीभरा माता हो भनेर पाथीभरा माताको सृष्टि देखि लिएर सम्पुर्ण नालीबेली बताउदै सबै चकित पर्नेगरी नाचिन।
उनै माताले फेरी अन्य कुराहरु बकेपछी सबै उपस्थित गाउलेहरु चकित परेका छन् । बक्ने मात्र हैन उनले गर्ने विचित्रको क्रियाकलापहरु देखेर सबै चकित परेका हुन् । कहिले रुने त कहिले हास्ने गर्दै ति माताले बकिन यस्ता कुराहरु ।
लगातार घटेको सुनचाँदीको भाउ आज फेरि बढ्याे ! प्रति तोला कति पुग्यो हेर्नुहोस्…..
अचम्मै भो ! नेपालमै भेटिए आधा केटा र आधा केटी भएका मान्छे, यस्तो अचम्मको प्रतिभाले भाइरल, कतिको दुरुस्तै आवाज ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
१८ वर्षीय युवती सेजललाई बोकेर अस्पताल लाने युवा मिडियामा, त्यो दिनको सबै नालिबेली बताए ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)